Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukuphelisa iNtsholongwane ye-COVID-19 ngee-Ionizers zoMoya oMtsha
Ukusukela ngoMeyi ka-2021, uMbutho wezeMpilo weHlabathi uye waqaphela ngokusemthethweni amasuntswana afakwe i-aerosolized njengendlela yosulelo lwe-COVID-19. Ukosulela okuphezulu kokwahluka kwe-delta kukwathetha ukuba iisetingi zangaphakathi ezinokuhamba komoya kakubi zibeka umngcipheko omkhulu wokosulelwa yi-COVID-19 kuba amasuntswana entsholongwane emoyeni anokuhlala emoyeni ixesha elide.
Ngaphambili kuphononongo lokususwa kwe-aerosol olupapashwe kwinqaku lophando lwe-OSF (inqaku loPhando le-OSF lika-2021) ekuqaleni kuka-2021, isityalo sika-Zero2.5 kunye ne-ionizer esekwe kwifiber yendalo yaboniswa ukuba isuse kakhulu i-95% ye-aerosol yomoya ukusuka kwimizuzu engama-25 (ngaphandle kwemizuzu engama-7). ionizer) ukuya ngaphakathi kwemizuzu esi-20 kwigumbi le-3 m4,000 elizaliswe ngamasuntswana e-aerosol angama-3 kwi-cm12 nganye. Oku kulingana nokuba ne-ACH (“utshintsho lomoya ngeyure”) ukuya kutsho kwi-141 kunye ne-CADR (“izinga lokuhambisa umoya ococekileyo”) ye-3 ftXNUMX ngomzuzu.
Nangona kunjalo, njengoko amazwe aqala ukubona ukuphinda kuhlaziywe kwamanani amatyala e-COVID-19 ukusuka kulwahlulo lwe-delta, i-Zero2.5 ikwakhawulezise iinzame zokuqinisekisa ngokuzimeleyo isiphumo sokhuseleko esinikezelwa zii-ionizers zomoya wethu wendalo ngokuchasene ne-COVID-19.
Ukusukela ngoNovemba ka-2021, iqela elikwi-Zero2.5 liyavuya ukwabelana ngokuba iziphumo zovavanyo oluzimeleyo lokhuselo lwentsholongwane ziphumile ekugqibeleni emva kwenkqubo ende nengqongqo yokuqinisekisa yiTexcell. I-Texcell ngumbutho wophando lwekhontrakthi yehlabathi eyasekwa ngo-1987 egxile ekuvavanyeni intsholongwane, ukukhutshwa kwentsholongwane, kunye nokhuseleko lwendalo.
I-Texcell yenze uphononongo lokucocwa kwentsholongwane egazini, oluqhele ukusetyenziswa kushishino ukumisela ukusebenza kwenkqubo ekungavuyiyo intsholongwane ngokuthelekisa inani lilonke lentsholongwane ekuqaleni ngokuchasene nesixa sentsholongwane esishiyekileyo emva kwenkqubo yokulwa nentsholongwane.
Uvavanyo lubandakanya iZero2.5 yeNatural Fiber Coco Coir Air Ionizer CF4000 kwaye yabonisa ukuba i-99.998% yentsholongwane ye-Sars-Cov-2 ayizange isebenze kwiiyure ezi-3 kwibhokisi ye-57-litre - emele ukucuthwa kwelog ye-4.77. Ngokomzekelo, ukucuthwa kwelogi ye-1 ilingana nokunciphisa i-10, ngelixa i-log yokunciphisa i-2 ilingana nokunciphisa i-100. Ukwehliswa kwelogi ye-4 nangaphezulu ithathwa njengesebenza kakhulu ngemigangatho yoshishino ekunciphiseni inani lentsholongwane. Uvavanyo lokulawula lubonise ukuba ngokungabikho kwe-ionizer yomoya ye-Zero2.5, i-99.999% yentsholongwane yahlala isebenza emva kweeyure ze-3.
Njengenxalenye yesicwangciso sokuvula kwakhona sase-Singapore esisingise kwinto entsha yesiqhelo, ii-ionizers zethu zomoya ezisekwe kwi-fiber yendalo - ngoku enokuqinisekiswa okuzimeleyo kwezenzululwazi ekuvuleni intsholongwane ye-COVID-19 - zinokudlala indima ephambili yokukhusela kwiindawo ezinabantu abaninzi.
Ukusasaza izicoci zomoya eziqhelekileyo akwanelanga kuba usulelo luqhele ukwenzeka ngoqhagamshelwano oluthe ngqo ngexesha lokwenyani. Kukho ifestile yobuthathaka phakathi kwexesha le-aerosols yentsholongwane eyenziwa ngumntu osulelekileyo kunye nexesha apho umoya uhlanjululwa ngokusebenzisa izicoci zomoya zorhwebo. Umngcipheko wokuhanjiswa kweemayile zokugqibela ukhula ngokubonakalayo kwiindawo ezixineneyo.
I-Zero2.5's Natural Fiber Air Ionizer iyawunciphisa lo mngcipheko ngokunciphisa ukuxinana kwentsholongwane ngexesha lokwenyani kufutshane nomthombo. Uxinaniso oluphezulu lwe-Negative Air Ions (NAIs) eveliswa yi-ionizers yethu yendalo esekwe kwifiber kufutshane nomthombo wentsholongwane ibonelela nge-360-degree sphere yokhuselo, njengeqamza lokucoca umoya elinciphisa umthwalo wentsholongwane ukukhusela abasebenzisi ngaphakathi. Ngaphaya koko, njengoko kuqinisekisiwe yi-Texcell, ukukwazi kwe-Zero2.5 Ioniser ukwenza intsholongwane isebenze kunceda ukunciphisa okanye ukunciphisa umngcipheko wosulelo.
Ukulawula umngcipheko wosulelo lwemayile yokugqibela kwiindawo eziphezulu zezithuthi kuya kuba ngundoqo, njengoko uqoqosho lufunda ukuphila ne-COVID-19. Ukhuseleko lwexesha lokwenyani ngokuchasene nentsholongwane ephilayo enikezelwa yi-ionizers yendalo ye-fiber ye-Zero2.5 inokumiselwa kwezi ndawo ezinomngcipheko ophezulu ukunciphisa kakhulu ixesha losulelo olunokwenzeka ngokuvala intsholongwane kufuphi nomthombo.